एजेन्सी बैशाख ११ – ज्योतिषको आधारमा आज हामी तपाईंलाई शरिरका यस्तो स्थान बताउँदैछ..
–केदारनाथ नेपाल ‘निश्चल’ रगतविना जीवनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आकस्मिक कारणले ..
एजेन्सी बैशाख १० – मासुमा प्रोटिनको मात्रा शाकाहारी खानाको तुलनामा धेरै हुने गर्..
ओन्ली माई हेल्थ बैशाख ९ – यस्ता थुप्रै घरेलु उपाय छन् जसले सेतो कपालको समस्यालाई..
डा. विनय रेग्मी बाथरोग विशेषज्ञ बाथरोग नसासम्बन्धी समस्या हो । जोर्नीमा बाथरोगले बढी दुःख दिन्छ । बाथरोगको उपचार हुन्छ । तर, जाँचपछि औषधि सेवन गर्ने क्रममा बिरामी धेरै नै सचेत हुनुपर्छ । बाथरोग विशेषज्ञको सुझाबलाई हुबहु पालना नगरेको अवस्थामा रोगीको अवस्था जटिल बन्न सक्छ । तपाईं पनि बाथरोगको औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने डा. विनय..
नसा च्यापिएको उपचार नभए प्यारालाइसिसको खतरा
डा. श्रीकृष्ण गिरी हाडजोर्नी रोगविशेषज्ञ वीर अस्पताल नसा च्यापिने समस्या लिएर कैयौँ व्यक्ति अस्पताल आइपुग्छन् । नसा च्यापिएपछि महिनौँ थेरापिस्टकहाा धाउँदा पनि निको नभएर हैरान भएका व्यक्ति भेटिन्छन् । आखिर नसा के कारणले च्यापिन्छ ? वीर अस्पतालका हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन् : नसा च्यापिने केही कारण अव्यवस्थि..
सुरेश राउत इन्जिनियर भिमेश्वर नगरपालिका ७२ सालको महाभूकम्पपछि नेपालमा बलियो तथा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने चाहना सबैमा आएको छ । घर आकर्षक मात्र भएर हुँदैन, बलियो हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने चेतना फैलिएको छ । सोही कारण अहिले घर बनाउनुअघि मानिसहरू उपयुक्त जमिन, दक्ष कामदार तथा गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीमा विशेष ध्यान दिन थालेका..
गर्भवतीले यसरी सोचौँ
बिहान उठ्नेबित्तिकै व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने । अन्य समयभन्दा यो समयमा सरसफाइमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । पोषिलो खानेकुरा खाने । अन्य समयभन्दा बढी झोलयुक्त खानेकुरा खाने । नियमित सेवन गर्ने औषधि आइरन, क्याल्सियम खाने । राति आठ घन्टा र दिनमा दुई घन्टा अनिवार्य सुतेर आराम गर्ने । गर्भवती महिलाले मनमा सकारात्मक कुरा मात्र सोच्ने । नकारात्म..
प्रकाशराज रेग्मी मुटुरोग विशेषज्ञ वीर हस्पिटल एकपटक धूम्रपानको लत लागिसकेपछि त्यसबाट छुटकारा पाउन कठिन हुन्छ । चुरोट, सुर्तीमा हुने निकोटिनले पनि धूम्रपानको लत छुटाउन मुस्किल बनाउने गर्छ । सोही कारण आफूलाई गलत लत लागेको थाहा हुँदाहुँदै पनि धूम्रपान त्याग्न धेरैलाई गाह्रो हुन्छ । तर, इच्छाशक्ति भएमा लागुपदार्थ सेवन त्याग्न नसकिने..
डा. सुवासप्रसाद आचार्य सघन उपचार विशेषज्ञ त्रिवि शिक्षण अस्पताल रगतमा हुने संक्रमण ‘सेप्सिस’का कारण नेपालमा हरेक वर्ष आइसियूमा भर्ना भएकामध्ये ३० प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ । आइसियूमा आउने कुल बिरामीमध्ये ७० प्रतिशत सेप्सिसकै कारण भर्ना हुने गरेका छन् । कुनै पनि प्रकारको संक्रमण हुँदा शरीरको रोग प्रतिरोधक प्रणालीले ..
एजेन्सी बैशाख ७ – तपाईंको नामको पहिलो अक्षर तपाईंको व्यक्तित्वको विभिन्न राज खोल्ने गर्दछ । सायद तपाईंलाई थाहा नहोला, तर यो यस्तो जानकारी हो जसमार्फत तपाईं आफ्नो बारे वा अन्य व्यक्तिका विशेषता सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । यहाँ आज हामी तपाईंलाई अंग्रेजी अक्षरको ‘एस’ बाट नाम सुरु हुने व्यक्तिको विशेषता बताउँदैछौं । नेतृत्व क्षमताः..
एजेन्सी बैशाख ७ – स्टाइल र फेसनसँग जोडिएका यस्ता थुप्रै गल्तीहरु छन् जो धेरैजसो पुरुष दैनिक गर्ने गर्दछन् । तपाईंले के लगाइरहनुभएको छ र कसरी लगाइरहनुभएको छ, त्यो निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । थुप्रै पटक तपाईंको स–साना गल्तीले तपाईंको छाप नराम्रो पर्नसक्छ । आज यहाँ यस्तै गल्तीबारे जानकारी दिइएको छ । यी गल्तीलाई भावी दिनमा नदोहोराएर [&h..